IsiGqeba soku-1 uMnu. Poolside Apt: "Kilele suite" - I-Airbnb
IsiGqeba soku-1 uMnu. Poolside Apt: "Kilele suite"
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGanesh
Imnandi, isandula kulungiswa igumbi lokuhlambela elisecaleni elijonge kwizibuko laseChristiansted kunye nesiqithi saseBuck. Le yindawo yokuhlala yabucala enesango kuphela eyakhiwe kwiPrincesse Hill Estate, iimayile ezi-2 ukusuka kwidolophu yaseChristiansted kunye nemizuzu emi-5 ukuya kwiivenkile zegrosari zasekhaya, iindawo zokutyela ezikhethekileyo, kunye neelwandle zasekhaya.
Vula amakhethini akho kwaye wonwabele ukuphefumla ukuthatha iimbono zesiXeko esidala saseDanish, isiqithi saseBuck, kunye nesitshixo esiluhlaza. Ufuna nje ukuphumla? Yonwabela ukufikelela ngokuthe ngqo echibini kunye nezinyuko zebhafu ezishushu kude nomnyango wakho.
IYunithi yesi-6, eyaziwa ngokuba yi-Kilele suite (igama lesiSwahili elithetha "Incopho"), yayiyindawo yesigqeba sangaphambili. Ngoku iyafumaneka kuluntu kwaye isanda kulungiswa, ibonisa enye yeembono ezinobubele. Ipropathi isagcina imbali etyebileyo yoyilo, ifakwe kwizinto zale mihla kulo lonke. Ibiligugu lenkcubeko kule minyaka itsala umdla, abalawuli kwihlabathi liphela, ukubamba iminyhadala ekhethekileyo, kunye nerenti yezindlu zabucala.
Indawo yonke ihleli kwiihektare ezi-3 ezigcweleyo kwaye yonwabele iimbono ezintle zasempuma! Yonwabela ukuphuma kwelanga okutshisayo kwigumbi lakho lokulala labucala kwaye ubukele amaza eqhekeza kulwalwa lweChristiansted. Okanye phumla nje kwichibi lethu lamanzi anetyuwa ecwengileyo okanye utsibe kwi-tub eshushu kwaye wonwabele iglasi yechampagne.
Yonwabela ukuphuma kwelanga okuhle okanye usele iglasi yewayini kwi-estate hot tub, ngelixa usonwabele imbonakalo entle kunye nempepho yaselunxwemeni. Ukusuka kwigumbi lakho lokulala, yonwabele ukuvuka ubone umbono omangalisayo wezibuko lamaKristu kunye neziqithi ezikude. Igumbi lakho lokulala libandakanya iscreen esisicaba seTV yeHD kunye neyunithi yeA/C ethe cwaka.
Relax kwigumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa elineshawa efakwe ngamatye endalo. Kukho abalandeli besilingi kwigumbi ngalinye kunye nomgangatho omtsha we-travertine tile kulo lonke igumbi. I-TV ye-Cable kunye nenkonzo ye-intanethi ye-Wi-Fi ekhawulezayo zonke zibandakanyiwe.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libonisa uluhlu lwegesi, izixhobo zentsimbi engatyiwa kunye neetops ezintsha zegranite. Igumbi lokuhlala elitofotofo libandakanya iscreen esicaba HD TV. Iwasha kunye nesomisi nazo ziyafumaneka ukuze uyisebenzise.
Ulindelwe ngumhlaba ochumileyo wetropikhi, uzaliswe nemithi yesundu yekhokhonathi, izityalo zephayinapile, iAvocado, iApile yeswekile, imithi yePapaya, kunye noMthi weMango emazantsi epropathi. Ukubuyela kwakho kweTropiki yaseCrucian ikulindile!
I-Little Princesse Hill yindawo ebumelwaneni epholileyo, esembindini kunye nemizuzu kude neChristiansted kunye ne-boardwalk. Yehla induli kwaye usecaleni kwevenkile enkulu, isikhululo segesi, ukutya okukhawulezayo, ikliniki yokhathalelo olungxamisekileyo, kunye neelwandle ezintle zasekhaya. Kwimizuzu emi-5, usedolophini kwaye unokonwabela imisebenzi eyahlukahlukeneyo- ukuntywila emanzini, ukuloba, uhambo oluya eBuck Island (iPaki yeSizwe engaphantsi kwamanzi), ukuthenga, ukutya okulungileyo, nokunye okuninzi.
Indawo yePropati: 13 Little Princesse Hill Christiansted, VI 00820
Kutshanje sifudukele kwiZiqithi zaseVirgin emva kokuchitha iminyaka kushishino lokwamkela iindwendwe. Sobabini mna nenkosikazi yam sichithe iminyaka kuphuhliso lwehlabathi kwaye sichithe iminyaka eli-10 edlulileyo sihlala phesheya kumazwe awohlukeneyo kuMzantsi-mpuma we-Asia nase-Afrika. Ukuba nemvelaphi etyebileyo kusenze ukuba siqonde iimfuno zabathengi bethu kwaye senze umoya wokuphumla.
Sijonge ukudibana nawe kwisikhululo seenqwelomoya xa ufika kwaye siya kukubonelela ngembeko kwipropathi. Siza kumisa umngxuma kwivenkile yokutya ukuze sithathe naziphi na izinto ezibalulekileyo onokuthi uzifune. Sine-24-7 kumntu wokugcinwa kwepropathi yomnxeba kwaye ziyafumaneka 24-7 ukuphendula imibuzo okanye ukunika nayiphi na inkxaso efunekayo. Ukuba ufuna uncedo lokubhukisha nantoni na, siyavuya ukukunceda. Siyazi ukuba kunjani xa undwendwela indawo entsha!
Nceda uzive usekhaya kwaye usazise ukuba ufuna ntoni.
Kutshanje sifudukele kwiZiqithi zaseVirgin emva kokuchitha iminyaka kushishino lokwamkela iindwendwe. Sobabini mna nenkosikazi yam sichithe iminyaka kuphuhliso lwehlabathi kwaye si…